Fitohizan'ny hafatra : [quote=gasy1zay]Izaho indray rhaj0 tsy mpanarandre...
rhaj0 - 09/02/2018 13:18
gasy1zay Izaho indray rhaj0 tsy mpanarandrenirano fa dia mitazona ny principe nitaizana anay hatrizay na dia mipetraka aty @ tany miaina civilizationa tandrefana aza.
Ka ilay "principe nitaizana" anao angaha moa ry Gasy1zay, tsy hoe, ny RaR-nao kay "mpanarandrenirano" tao koa, fa tsy mba "mitazona ny principe nitaizana" azy tao.
Nefa anie ireo tandrefana izay zeneration kristiana am-polony efa niala tao ary lasa atheista.
Fa ao izany ianao mikarainkona ao ry Gasy1zay a... Ny zanaka aman-jafinao no hampianatra anao ho "apte à vivre en société" any aoriana any
Dia mahonena i Gasy1zay "mpanara-drenirano":
- manaraka ny havendranan'ny RaR-ny, izay (noporetina) nanaraka ny revin'ny vazaha, revy izay na zareo vazaha azany efa miala aminy
- hanaraka ny hatsilon'ny zanany/zafiny indray any aoriana, izay hanazava azy hoe, tena ahoana bainina fa mila ho "apte à vivre en société" 2018 ianao ity aaa...
Ampiasao ihany ilay coco sy ny hazon-damosina ry Gasy1zay aaa.. fa tsy higenongenona lava ao hoe..
"tsy mpanara-drenirano ho'a ny Gasy1zay..."
gasy1zay - 09/02/2018 15:03
i rhaj0 no mety manana olana raha misy olona tsy mitovy hevitra/fisainana/finoana sns aminy fa izaho manokana tsy manana olana amin'zany ka
rhaj0 - 09/02/2018 15:45
Ka ahoana azany ny fandraisanao ny gay/avortement/marijuana teo ry Gasy1zay aaa...
Toa hotry ny miseho ho malala-tsaina indray mantsy izany i Gasy1zay, ka hoe, "tsy manana olana amin'zany", izany hoe, hotrahotran'ny mody hoe, ekenao tsara ny olona hiaina ny fiainany??? gay/avortement/marijuana???
Ntss... Izay indray angaha no nanafaran'i Jesosy anao re ry Gasy1zay?
Tena m(p)ihatsara vela-tsihy anie ianao izany ry Gasy1zay eee.. mody hoe gnagna eto, fa ao ambadika ao gnogno.
Ny ahy kosa, dia ny fandraisako ny Kristiana aloha, dia TSISY olana amiko raha mbola tsy mikitikitika ny fi(s)ainako.. Fa rahefa mitady hanindrinindry ny fiaraha-monina @ finoany azy Kristiana manokana ao indray izy, dia miteny aho fa olana io. Hoe, raha ianao no te-hikarainkona ao @ box-kelinao ao ry Gasy1zay, dia reveo ao ny anao. Fa raha ny hafa koa tianao hiara-hikarainkona aminao ao, dia ... ao ianao izany eee...
gasy1zay - 09/02/2018 17:26
Ka efa voasoratra ao anaty baiboly aho anie rhaj0 fa any amparany any (izao vavinandro misy antsika izao io resahiny io) dia hisy ny hihemotra( kristiana niverindalana na lasa athé), maro ny ho tia tena, tia fahafinaretana noho ny ny fitiavana an'Andriamanitra sns... koa inona no tokony hampikorapaka ahy raha mahita firenena manalalaka ny rongony, fanalanjaza, sy ny fanambadiana L+L na V+V raha efa nambara fa hisy zany?
Efa nambarako hoe tsy d'accord aho satria amiko fahotana izany fa tsy midika zany hoe matahotra aho na mitsoaka an'zareo satria efa fantatro fa hitranga zany fa efa voasoratra e!
rhaj0 - 09/02/2018 17:51
Ka inona no tian'i gasy1zay tenenina @ hoe "tsy manana olana amin'zany...olona tsy mitovy hevitra/fisainana/finoana" izany? Ohatra eto izao ireo gay/avortement/marijuana.
Hoe "fahotana" ireo, ary efa hoe "hitan'ny Baiboly", dia ahoana?
1- mi-vivre et laisser vivre ve i Gasy1zay, sa
2- "totoinao" sermon @ anaran'i Jehovah ireo olona ireo, ary "raranao" tsy hanao akoriny aza, satria izay no efa nafaran'i Jesosy anao?
gasy1zay - 09/02/2018 21:22
Izy ary tsy miangona koa aona moa no ananarana azy? Dia ahoana koa ny andrarana olona hanota? Raha ohatrany rhaj0 daoly ry zareo mety nisy azo atao ihany
rhaj0 - 09/02/2018 22:04
gasy1zay Izy ary tsy miangona koa aona moa no ananarana azy? Dia ahoana koa ny andrarana olona hanota?
Raha ny fahazoako azy izany, dia mi-"vivre et laisser vivre" i Gasy1zay. Tsy mba isan'ireo Kristiana be sermon sy manaporiporitra ny mpiara-belona aminy.
Sa moa, ireo olona "tsy miangona" IHANY, izay efa tsy miara-miaina @ Gasy1zay, satria dia efa alavirin'i Gasy1zay fa considerer-ny toa olona boka, dia @ ireo no mody isehosehoan'i Gasy1zy ny "fahalala-tsainy" hono?
Fa raha ny fianakams-n'i Gasy1zay no mitonantonana manao gay/avortement/marijuana, dia hiharan'ny fahatezerana lehibe an'i Gasy1zay?? fahatezerana lehibe araka ny fomban'i Jesosy sy Jehovah Andmntra, ka tena lasa miaina @ Helo velona izay mahasahy nitonantonana manao gay/avortement/marijuana eo??
gasy1zay - 13/02/2018 15:05
Andriamanitra rhaj0 dia manaja ny safidin'ny olombelona hatramin'ny andron'i Adama sy Eva ka mandrakahehitrio a! Rehefa tsy mitady ny tavany ianao dia tsy hahita azy. Rehefa tsy miantso ny anarany ianao dia tsy hahita ny heriny.
Ary tsy ny fahotana no tena mahatonga ny olona any @ helo satria samy nanota daoly ny olombelona fa ny tsy fandraisana ny famonjena nataon'i Jesoa Kristy teo @ hazo fijaliana no mahavery ny olona 1 any amin'ny helo.
rhaj0 - 13/02/2018 15:57
gasy1zay Andriamanitra dia manaja ny safidin'ny olombelona
Raha "misafidy" ny ho gay/avortement/marijuana izany ny olombelona ry Gasy1zay, dia "manaja" izany "safidy" izany Andmntra, hoz'ianao?
Ary izato ianao ry Gasy1zay, mba manao ahoana @ izany resaka izany? mba "manaja" koa an?
Tsy isan'ireo Kristiana mpanoto-sermon ianao izany an... nefa anie ireo kristiana mpanoto-sermon mba manaraka ny hafatry ny Zanany (ara-baki-teny) fotsiny eee...
Nefa kosa ho'a, raha ny fahitako azy, toa mba manao teny ankolaka, an'avona na manaz'inona, any ambadika any ihany ry Gasy1zay... sa tsy izany ?? Sa tena madio saina sy eritreritra tanteraka mihintsy i Gasy1zay, dia "manaja" ny safidin'ny olona tokoa??
gasy1zay - 13/02/2018 18:11
Andriamanitra tsy afaka hanakana ny olona hanota, fa efa nanome ny vahaolana amin'ny ota izy mba tsy ho very ianao, ny anjaran'ny kristiana dia ny mampahafantatra ny vahaolana hoan'ireo tsy mbola mahalala, raha efa mahalala izy fa tsy te halala dia zay ilay hoe manaja ny safidin'ny tsirairay na i Andriamanitra na ny Kristiana, ny adidin'ny Kristiana dia ny nampahafantatra ny famonjena fa tsy ny hanova ny safidin'ny tsirairay, azy sy Andriamanitra iny rehefa tonga ny fitsarana farany.
rhaj0 - 13/02/2018 18:47
1. Andriamanitra, izany HONO, hoy Gasy1zay, tsy afaka hanakana ny olona hanota.
Dia tena mba sampona mihintsy ilay tantara ampinoana anareo ao izany ry Gasy1zay kah...
Ny 2018 nefa izao, jereo tsara fa raha ohatra hoe,
- raha misy olona handeha hitsambikina hamono tena, safidiny io, dia mikorapaka daholo ny olona ary miezaka ny "hanakana azy tsy hamono tena"
- raha misy olona efa hita fa mamo, dia mbola mikasa hitondra fiara, safidiny io, dia mikorapaka daholo ny olona haka ny lakilen'ny fiara
Fa ny an'Andmntra izany HONO, hozy i Gasy1zay sy ny finoany, dia avelany any eee... JereNY fotsiny. Nefa @ io HONO ilay Andmntra dia omniscient koa, ary efa fantany fa hihinan'ny tsakaokany ilay olona raha mitazona ny safidiny ao. Fa avelan'ilay Atra any eee...
Nefa anie ilay olona ho'a mety hoe mba badrahodra kely ao, dia mba mitanandrandrana ao @ "safidiny" ao, dia nefa ilay ain-dehibe no en jeu.. fa jeren'ilay Andmntra fotsiny HONO eee... Efa "nanome vahaolana" HONO Izy, fa i Badrahodra no tsy mahay (nihaino?), ka dia avelao ho voa any @ izay mahavoa azy ao ihany: izy no tompon'andraikitry ny "safidiny" fa i Andmntra "manasa tanana"..
Dia mba karazana Andriamanitra inona mihintsy ho'a izao Andriamanitry ny Kristiana izao ee...
2. TSY "afaka" ahoana Izy ry Gasy1zay a??? inona HONO no maha-omnipotent azy?
Raha ny marina re ry Gasy1zay, dia TSISY izany (Andmntra) omnipotent (sy omniscient) izany. Hita fa TSY mahavita raha ilay Andmntra, dia mody atao hoe, ilay olona no TE-hihinan'ny tsakaokany any, safidiny izany.
Raha ny tena marina azany, dia TSISY izany Andmntra izany, fa ny imazinatino-na(re)o ry Gasy1zay no maniditsidina ao. Dia rahefa hita io fa mangorera (i Atra), dia asiana ity lojikan'ny tere-ko-marina fa resa-Baiboly ity fotisny.
gasy1zay - 13/02/2018 20:35
Tsy azon'i rhaj0 mintsy ny fandehany dia ohatrany lasa miteniteny foana izy. Andriamanitra tsy mitady olona hanompo azy satria noporetiny hanompo azy, tsia tompoko, olona hanompo azy satria tia azy no tadiaviny.
Vitany ny manery anao hanompo azy rhaj0 saingy tsy avy amin'ny fonao izany fa noterena, Andriamanitra tsy dictateur hoy aho fa nanome antsika safidy malalaka, hino sy hankatoa azy, na tsy hino sy handa azy. rhaj0 zany sady te hahita ny herin'Andriamanitra no tsy mino azy, hafahafa ihany an!
rhaj0 - 13/02/2018 22:27
gasy1zay Andriamanitra tsy mitady olona hanompo azy
Avilambilano foana ny resaka ry Gasy1zay aaa.... Izaho indray ve hi-contredire anao @ izany.
Satria... f'angaha tsy Andriamanitra Tompo no fiantsoanareo azy, na ny marimarina kokoa, izany no tiaNY iantsoanareo Azy??
Koa aza antsoina Tompo Tompo izany izy ry Gasy1zay aa... ianao izany koa toa maka 19 nefa ianao Gasy1zay ihany no milaza fa TSY mitady anao Izy.
Tsitsipolitra ery an-tany ngazana an...
Fa i Badrahodra koa anie TSY nangataka ny "hanompo" eee... @ maha-badrahodra azy, dia TSY hainy ilay mivavaka (mangataka) toa an'i Gasy1zay. Fa saingy rahefa nanao izay "safidiny" tao izany i Badrahodra, ka tena TSy @ ilay sitrapon'Ilery, dia tonga dia direction la mort (helo); ary dia "jeren'ilay Andrmntry ny Kristiana" fotsiny mihinan'ny tsakaokany ao, satria "safidiny" HONO izany, hoz'Izy.
Aza mba Kristiana Badrahodra ihany eee... Tsy vitan'ny midawawa sahirana @ fiainana ao, fa TSY ampian'ilay Omnipotent Omniscient akoriny rahefa voa... SITRAPONAO io eee.. Hadalanao marina.
gasy1zay - 13/02/2018 22:41
aza avadika araka zay itiavanao azy rhaj0 ny ambaran'ny hafa a! Vakio tsara fa aza raisina an-tendrony fa mampiahiahy ny "intelligence"nao, averiko indray fa Andriamanitra tsy mitady olona hanompo azy noho ny tahotra na ny famoretana fa amin'ny fitiavana, mahazo teny gasy ve aloha rhaj0 sa niova firenena dia lasa tsy mahazo fehezanteny tsony?
Vakio tsara fa misy olona tadiavin'Andriamanitra hanompo azy tokoa saingy ilay "motivation" no tsy mitovy, raha noterena hoy aho i rhaj0 hanompo azy dia ho lasa mpikomy ohatrany satana ny hiafarany ary zay no antony hanomezany an'i rhaj0 fahafahana hisafidy ny hanompo azy na tsia fa tsy naneho ny heriny izy hoe eh!!! rhaj0 haingana mandohalika eo anatrehako ianao raha tsy zany dia ... Tsia an! tsy manao an'zany hoy aho Andriamanitra fa mitady azy ianao dia hahita azy, mino azy ianao dia hovaliany, mivavaka aminy ianao dia hainony, tsy mino azy ianao dia mangina izy.
rhaj0 - 14/02/2018 01:13
Eny azany fa ahitsy kely ee.. izao HONO hozy i Gasy1zay eee..
gasy1zay Andriamanitra tsy mitady olona hanompo azy noho ny tahotra na ny famoretana fa amin'ny fitiavana..
Fa i Badrahodra koa anie ... @ maha-badrahodra azy... dia mba "manompo" koa hono izy ao an-tsainy ao, fa TSY hainy tsara angaha ilay "manompo" toa an'i Gasy1zay, ilay Kristiana lafatra, na i RBNIR, ilay Kristiana-préféré.
Ary rahefa nanao izay "safidiny" tao izany i Badrahodra, ka tena TSy @ ilay sitrapon'Ilery, dia tonga dia direction la mort (helo); ary dia "jeren'ilay Andrmntry ny Kristiana lafatra sy préféré" fotsiny mihinan'ny tsakaokany ao, satria "safidiny" HONO izany, hoz'Izy.
Tena TSY haiko hoe, aiza ho aiza ilay "fitiavan'Andmntra" an'i Badrahodra (tsy mahay) manompo @ izany.
Aza mba Kristiana Badrahodra ihany eee... Tsy vitan'ny midawawa sahirana @ fiainana ao, fa TSY ampian'ilay Omnipotent Omniscient akoriny koa rahefa voa fa lazaiNY HONO fa safidiny izany... Ary tampohin'i Lafatra sy Préféré @ hoe: SITRAPONAO io eee.. Hadalanao marina.
RBNIR - 14/02/2018 12:39
Oviana aho no efa nitaraina tamin'i rhajo????
rhaj0 - 14/02/2018 13:39
hi hi hi... TSY azaon'i RBNIR ny resaka. Izao eee... Aleo alamina di asesy.
Misy karazany ny Kristiana
1- ny Kristiana LAFATRA, toa an'i Gasy1zay. Lafatra tena lafatra zareo, "mahay" mivavaka, ary "ampazahoan'Atra" rehefa mangataka iny. Aleon'i Jesosy mampahazo an'i Gasy1zay-LAFAtrA fiadanana sy fahasalamana, toa izay mamonjy ireo Zaza gasy maty isaka ny 12 minitra.
2- ny Kristiana PRÉFÉRÉ-nJesosy, toa an'i RBNIR. tian'i Jesosy zareo, ka rahefa ho avy ny farany, dia na dia voatelin'ny trou noir aza ity galaksia misy antsika rehetra ity, dia tsy hadinon'i Jesosy i RBNIR-PRÉFÉRÉ, fa raofiny @ kalesany tarihin-tsoavaly, dia afindrany etsy @ ilay galaksia etsy akaiky; io galaksia io, na dia eo akaiky eo azany, dia TSy mba trohin'ilay trou noir.
3- ny Kristiana BADRAHODRA. Ireo dia TSY mba mahay mivavaka toa an'i LAFATRA, ary tsy hiangaran'i Jesosy toa an'I PRÉFÉRÉ. Fa ireo dia badrahodra, tsy mahay "manompo", ary nandrasaonina fa diso "safidy" ao foana, ary dia arian'i Jesosy any @ Helo, na hoe, very any @ Helo, nefa dia jeren'i JEsosy fotsiny, satria HONO "sitrapony" ny mahavery azy.
4- ny Atheista dia TSY Kristiana.
gasy1zay - 14/02/2018 14:52
Aleo aloha atao mazava tsara fa tsy mety azon'i rhaj0 mintsy ilay resaka, ny olona diso safidy resahina dia izay nisafidy ny tsy hanaraka ny tenin'Andriamanitra, izay nisafidy ny tsy hino azy, izay nisafidy ny tsyhandray ny famonjena natolony, ka raha ny marina dia tsy tokony hisy kristiana diso safidy arak'io ambaran'i rhaj0 io, ny baiboly dia milaza fa izay nisafidy ny famonjena dia manantsaina fa tsy misy badahodra izany
rhaj0 - 14/02/2018 16:06
F'angaha indray tsy hoe: rehefa "manota" dia safidiny.
I Badrahodra, miampy ny fandrebireben'ny gourou toa an'i Hrnrn, dia "misafidy" ny fiainany badrahodra ao.. lavitry ny LAFAtrA sy PRÉFÉRÉ.
gasy1zay - 14/02/2018 16:42
Ny olona rehetra dia nanota avokoa, ny safidy dia hoe manaiky fa mpanota dia vonona ny hiova ary handray ny famonjena sa hanoy ny lalana mitondra any amin'ny fahaverezana ka mitoetra ao anaty fahotana, na nisafidy ny hiova aza ianao mety solafaka indraindray saingy miarina dia miverina manaraka ny Tompo, ny tsy mety dia ny te handova ny lanitra no sady tsy mahafoy ny fahotana.
Raha te hahazo misimisy kokoa ny famonjena hoa rhaj0 dia manantona ireo fiangonana evanjelika eto Canada fa resy lahatra aho fa hihahazava amin'i rhaj0 ny fitiavan'Andriamanitra.